Paragoay : Trano Vita Amin’ny Voatavomonta sy Plastika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2018 2:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2009)
Voanà voatavomonta (luffa cylindrica), sary an'i Laura512
Azon'ilay paragoaiàna Elsa Zaldívar ny Loka Rolex 2008 natao ho an'ireo mpanorina orinasa (ang) noho ny tetikasa iray fanofànana ireo vehivavy mpiahy tokantrano hamadika ny voatavomonta luffa cylindrica hanaovana kapakapa sy arontànana fampiasa any amin'ny trano fidiovana, fa koa hanafangaro ireo sisa avy amin'io spaonjin-javamaniry io hiaraka amin'ny plastika efa avy nampiasaina, mba hahazoana akora mafy. Ho azo atao ny manorina rindrina avy amin'izany, teknolojia iray izay afaka mandray anjara amin'ny fanavotana ny ala amin'ny alàlan'ny fanoloana ny hazo amin'io akora nafangaro tamin'ny plastika io.
Ao anatin'ny lahatsary eto ambany [ang], ilay Paragoay fantany no resahan'i Elsa : ny tsy fahampian'ny trano fonenana, ny fihenan'ny rakotrala haingana loatra, ny loto ateraky ny vokatra vita avy amin'ny plastika, ary velabelariny ny fomba entin'ilay tetikasa mamaha ireny olana ireny :
Fa inona moa ny voatavomonta e ? Zavamaniry mandady mihanika izy io. Azo hanina ny voan'ny karazany sasany rehefa otazana matoy, ny hafa indray mangidy, fa ny voatavomonta kosa ( luffa na loofah, amin'ny teny arabo), dia fantatra kokoa amin'ny voany somary manana toetranà spaonjy, rehefa avy noloarana sy namainina, mba hamaohana ny hoditra rehefa mandro. Ao amin'ny bilaogy cmc-cmc [ang], nalain'ny mpanoratra ho anaty saripika sy lahatsary ny tantsaha iray mioty ny vokatra voatavomonta, izay eo an-tsaha eo ihany dia efa voasany sy dioviny. Ao anatin'io lahatsoratra io, marihan'ilay bilaogera ihany koa ireo voa izay indraindray totoina mba hanaovana fanafody raokandro iadiana amin'ny fiakaran'ny tosidrà.
WilliamSabber ao amin'ny YouTube [port] nametraka ity lahatsary fohy noraketiny tao an-jaridainan'Ing. Adair Satler, ao Brezila ity, toerana nahitàny voatavomonta tena lava tokoa, nihoatra ny 120 cm :
Ny vaovao tsara dia miroborobo tokoa ny fitrandrahana ny voanà voatavomonta. Mandrisika ny fambolena azy io ireo ONG toy ny OIPIC [esp], mba hahafahan'ireo fianakaviana mpamboly miatrika ny fifaninanana amin'ny voly soja sy landihazo. Afaka ampiasaina ho sesika amin'ny fanaka na seza anaty fiara ihany koa ny voatavomonta, na hanaovana harona, kiraro, spaonjy fandroana, kapakapa, latsim-paladiha, fanasàna lovia (tsy mikiky ny fitaovana vita tamin'ny teflon), ho singa anaty savony natoraly vita tànana, ary na ho toy ny fanafody fitsaboana ny fahatsentsenan'ny orona aza. Ny lafiny iray hafa mahatsara ny voatavomonta dia izy mamelana mandavantaona. Izay tena mahafinaritra tokoa ho an'ireo miompy tantely. Misy hamahànana, hitazonana ny fahasalamana, ary hiantohana ny famokarana tantely avy amin'ny tohotra, araka ny ambaran'ny tranonkala Bees for Development (Tantely ho an'ny Fivoarana [angl]. Ary manomboka izao, toa avy amin'izay nataon'i Elsa Zaldívar, ho ampiasaina koa ny voatavomonta ho akora amin'ny asa fanorenana.